sawirada qabri qolka jiifka ee Michael Jackson - TELES RELAY
Sida aan had iyo jeer ognahay in dunidu aysan ahayn gurigeenna, taas oo macnaheedu yahay in aan ku nahay shisheeye uun dhulkaan.
Michael Jackson oo ahaa heesaa Mareykan ah, gabayaa heese iyo dhaanto. Isaga ayaa badanaa loo yaqaan "Boqorka pop", waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah tirooyinka ugu muhiimsan dhaqanka ee qarnigii XNUMX-aad iyo mid ka mid ah farshaxan-yahannada ugu waaweyn taariikhda heesaha.
Wuxuu ku dhashay Gary, Indiana, oo u dhaw Chicago, bishii Agoosto 29, 1958, wuxuu ahaa sideed ka mid ah toban carruur ah oo ka tirsan qoyska Jackson, waa qoys Mareykan ah oo shaqeeya fasalka kuna nool labo guri oo jiif ah oo ku yaal Jackson Street.
Michael Jackson wuxuu ka bilaabay shaqadiisa muusiga asaga iyo walaalihiis iyo xubnaha qoyskiisa Jackson Five sanadkii 1964, kadib wuxuu jiray lix (6). Kooxda ayaa horseeday naadiyo iyo baararka badan oo ay ku daraan tuubooyinka Motown.
Laakiin nasiibdarro, Juun 25, 2009, Michael Joseph Jackson wuxuu ku biiray awowayaashiis markuu 50 jir ahaa kadib markii uu ku dhacay wadne qabad ka dhacay gurigiisa ku yaal Los Angeles. Isku dayga CPR wuu fashilmay waxaana loola cararay isbitaal, halkaas oo uu ku dhintay subaxnimadii dambe. Hoos ka daawo sawirada qabrigiisa
Maqaalka ayaa ugu horeyn soo muuqday: https://afriqueshowbiz.com/la-tombe-de-michael-jackson-pourrait-etre-confondue-avec-une-chambre-photos/
Sawir ah Ariel Sheney Fadhiga DJ Arafat Qabiilku wuxuu Sababay Canaanta Shiinaha